Iskuul lagu dhisay qalab aan xabaddu karin, Maxay tahay sababta? | Biyoguurenews.com
Home Wararka Iskuul lagu dhisay qalab aan xabaddu karin, Maxay tahay sababta?
Iskuul lagu dhisay qalab aan xabaddu karin, Maxay tahay sababta?
Iskuul ku yaal dalka Mareykanka ayaa waxaa dib u habeyn loogu sameeyay qaab ay ku adagtahay in ragga hubeysan ay iskuulka ka fuliyaan toogashada aan kala sooca lahayn ee ka dhacda iskoolada dalka Mareykanka.
Dugsiga sare Fruitport ee ku yaalla Michigan ayaa noqonayaa iskuulkii ugu horreeyay ee ku yaalla Mareykanka, kaas oo lagu dhisay qalab dhisme oo aad adag oo ay xabbaddu karin.
Waxaa sidoo kale marinada ku yaalla gudaha iskuulka loo sameeyay qaab aan toosnayn si qofka weerarka fulinayo uusan u helin waddo sax ah oo u sahasha toogashada.
Fasalada ayaa sidoo kale laga sameeyay goobo ardayada ay si fudud iskugu qarin karaan haddii ay lacalla wax dhacaan.
Daaqadaha fasalada ayaa waxaa sidoo kale laga sameeyay qalab aan xabadda karin, halka dhammaan albaabadana halmar la xiri karo iyadoo la adeegsanayo badhan la riixayo, kaas oo ay gacanta ku hayaan maamulka iskuulka.Toogashooyinkii ka dhacay iskuulada Mareykanka ayaa horseeday qorshaha iskuulkan, waxaana ku baxay kharash gaaraya 48 milyan oo doolar.
2018-kii ayaa ahaa sannadkii ay dhacday toogashadii ugu badanayn ee ka dhacda iskuulada Mareykanka, waxaana ku dhimatay amaba ku dhawaacantay 113 qof sannadkii tagay.
Bishii Febraayo ee 2018-kii arday horay uga tirsanaa Dugsiga Sare ee Marjory Douglas ee ku yaalla Parkland ayaa toogtay 17 qof halka 17-kalena uu dhaawacay, kaas oo isticmaalay qori si sharciga waafaqsan loo soo iibsaday.
Bishii May ee isla sannadkii tagay arday dhiganeyay Dugsiga Sare ee Santa Fe High School ee ku yaalla magaalada Texas ayaa toogtay 10 qof halka 14 qof oo kalana uu dhaawacay.
Hase yeeshee ka dib toogashadii ka dhacday El Paso 3-dii Ogosto ee bishan aynu ku jirno ayuu madaxweyne Trump Sheegay in uu taageerayo go’aanka ah in baaritaan dheeraad ah lagu sameeyo dadka hubka laga iibinayo.
Previous articleHadalka Taliyaha Ka Soo Yeedhay Xukuumaddaa Kula Socotana, Caarena…Xildhibaan Qabiile
Next articleMadaxwayne Mustafe Cagjar Oo Sheegay Saddex Qodob Oo Ay Kaga Dayanayaan Somaliland.